Barcelona Oo Waxay Xiiseyneysaa Antonio Rudiger Iyo Shkodran Mustafi'
HomeWararka CiyaarahaBarcelona oo waxay xiiseyneysaa Antonio Rudiger iyo Shkodran Mustafi’
Barcelona oo waxay xiiseyneysaa Antonio Rudiger iyo Shkodran Mustafi’
December 2, 2020 Wararka Ciyaaraha, Horyaalka Ingiriiska, Horyaalka Spain 0
Barcelona ayaa lagu soo waramayaa inay dalab u direyso Antonio Rudiger iyo Shkodran Mustafi hadii ay ku guuldareystaan in ay isku dayeysey inay la soo wareegto Manchester City daafaceeda Eric Garcia marka uu furmo suuqa kala iibsiga bisha Janaayo.
Ronald Koeman ayaa ka maqan xulashooyinka khadka dhexe ee daafaca iyadoo Gerard Pique ay u badan tahay inuu garoomada ka maqnaan doono muddo afar bilood ah ka dib markii uu dhaawac jilibka ah soo gaaray bishii November.
Mundo Deportivo ayaa warinaysa in Garcia, oo 19 jir ah, uu weli yahay bartilmaameedka koowaad ee Barcelona laakiin kooxda La Liga ka dhisan ayaa soo xero gelineysa Rudiger iyo Mustafi oo ah bedelka ugu macquulsan.
Kooxda reer Catalan ayaa ku guuldareysatay inay heshiis la gaarto Manchester City madaama ay awoodi waayeen inay sare u qaadaan 9 milyan oo ginni oo kooxda Pep Guardiola ay dalbaneyso.
Garcia, oo shan kulan u saftay City ayaa qandaraaskiisa Etihad uu dhacayaa dhamaadka xilli ciyaareedka 2020-21, taasoo la micno ah inuu diyaar u yahay inuu si xor ah kaga tago kooxda.
Rudiger ayaa si aad ah loola xiriirinayay inuu ka tagayo Chelsea tan halka Mustafi uu hoos uga dhacay xulashada Macalinka Arsenal Mikel Arteta .